Ogaden News Agency (ONA) – CEEBTI UGU WEYNEYD: DOWLADA ETHIOPIA OO KU GUUL DAREYSATAY INAY SHIR KU QABATO JAAMACADA LONDON (IMPERIAL COLLEGE)
CEEBTI UGU WEYNEYD: DOWLADA ETHIOPIA OO KU GUUL DAREYSATAY INAY SHIR KU QABATO JAAMACADA LONDON (IMPERIAL COLLEGE)
Safaarada Itoobiya ee wadanka UK ayaa waxa ay iclaalimasay shir ay ku qabanayso Jaamacada weyn ee Imperial college, shirkaas oo ay sheegtay inay kasoo qeyb galayaan masuliyiin ka badan 60 isugu jira wasiiro heer fadaraal iyo Madaxda heer Kilil ee EThiopia. Waxa kamid ahaa dadkan Ina Ilay oo ah isagu danbiile loo heysto dilal iyo xasuuq uu ka geystay dhulka Somalida Ogadeniya.
Haddaba Shirkan ayaa waxa been yiri Xoogaga taagera Halganka lagu baadi Goobayo Xoriyada iyo Aayaha Ummada Somalida Ogadeniya. Jaaliyada Somalida Ogadeniya oo ay weheliyaan Jaaliyada Axmaarada iyo Qowmiyadaha kale ee Ethiopia ayaa Banaan bax aad u heersareeya oo xoog badan ku hor qabtay Jaamacada Imperial College London.
Waxay dadkan mudaharadaya ay hoosta kala sii xirteen Ardeyda Jaamacada Imperial College oo iyagu si xoogan u qaadacay Shirka Ethiopia rabto inay ku qabato Jamacada Imperial College: Halkaas oo dad kun ardey ahi ay isa soo tubeen Hallka Jaamacada iyaga oo wata boorar ay ku qoranaayeen : we Just Want to Study : isla markaasna ku dhawaqaya Goobtani waa Goob Waxbarasho siyaasad loogama baahna.
Hadaba Policeka ayaa waxa uu hor istaagi kari waayay Mowjada Shacabka Jaaliyada somalida Ogadeniya oo xoog usoo baxay Maalinimadi Sabtida oo xoog ku jiiray Policeka iyaga oo albaabka Halka shirarka Jaamacada xoog ku dhaafay. Waxa arintaas ay keentay in Masuliyiinti Jaamacadu shir dag dag ah ay galaan uguna baaqaan Safiirka Ethiopia ee UK in shirka la joojiyo madama oo amniga faraha ka baxay. ardeyda Jaamacada Imperial College ayaa hal mar qeylo ku dhuftay soona dhaweeyay go’aanka jaamacada ee lagu joojiyay shirkii Daba qoodhiga ee Ethiopia soo dhoo dhoobtay.
Waxa Daba qoodhigi iyo Woyanihi ku baryay waagi iyaga oo miciinsaday in si dhaqso leh ay u fakadaan ugana baxaan “Fire Exit-ka: jaamacada. Waxa Woyaanihii uu dib u galay abaabul si shirkooda ay ugu qabsadaan Safaarada Ethiopia dhexdeeda maadama meel kale aysan ku nabad gali karin.
Waxase aad yaab u leh: In shacabkii Banaanbaxa isugu soo baxay ay suuqa ceyrsadaan Dabaqoodhigii Iyo Woyanaha islamarkaasna ay ku xero oodeen safaarada Ethiopia. Shacabkan mudaharadaya ayaa ahaa kuwo si nabad galya ah ku mudaharadayay oosan geysanin wax dhaawac ah ama burnurin. Balse waxa jiray in dhowr qof oo Daba qoodhi ah oo naflacaarid ahaa oo ah qowmiyadaha axmaaro iyo Xaar wayaane inay kusoo weyraxeen shacabkii mudaharadayay halkaasna loogu geystay dhaawac iyada.
Waxa kale oo Jiray Buuqweyn oo ka dhex dhacay safarada dhexdeeda taas oo lanoogusoo waramay in Danbiile Cabdi Ilay uu ku dhex dagaalamay safarada dhexdiisa, balse buuqaas dib ayaan idinkala soo socodsiin doona.
Jaaliyada Axmaarada Iyo Somalida Ogadeniya oo wada jir usoo qaban qaabiyay Banaanbaxan ayaa waxa ay noo sheegeen inay aad ugu faraxsanyihiin sida wanaagsan ee Policeku ula shaqeeyay una sugay nabad galyada Goobta. Waxa ay dheheen aad ayaan ugu faraxsanahay talaabada ay qaadeen maamulka Imperial College ee ay ku joojiyeen shirka caddaalad darada ah. Gudomiyaha Jaaliyada UK Xuseen ayaa yiri Shacabka faraha badan ee kunka qof kor u dhaafay ayyaa sabab u ah in la fashiliyo Guumeystaha waxana aad ugu faraxsanahay in codkayagi uu gudbay.
Guushan ayaa ah guushi ugu balaarneyd ee Jaaliyada Somalida Ogadeniya ay ka gaarto Banaanbaxyada looga soo horjeedo “Xaar Wayaane” iyo Woyanaha.
Filimka Banaanbaxa iyo warbixino dheeraad ah dib ayaad ka heli doontaan.
yaa salaam, yaa salaam, waa guul wayn oo u soo hoyatay halganka xaqa ah ee shacabka reer Ogaadeeniya ay ku jiraan, waa jab lagama soo kabtaan ah oo gumaysiga haleelay.
jaaliyadda reer Ogaadeeniya ee UK guulaysta guulana ha idinla jiro.
waan filayay inay sidaas wax u dhacayaan oo wayaane wadkii gali inta ay meelahaa meeraysanayaan. walee god kasta oo aad gasho wayaanow waanu kuugu galaynaa. waagii baryayaba wayaanow waan ku weeraraynaa wayaanoooooooooow.